Maamulka Caafimaadka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Maaraynta Caafimaadka
Isuduwidda daryeelka dhammaan aagagga caafimaadka xubinta.
Bixinta Daryeelka Maareynta Xaaladaha Caafimaad ee Isku-dhafan
Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka waxay bixiyaan qaab adag oo lagu qiimeeyo waxtarka xubnaha daryeelka ay helaan. Anaga oo aqoonsaneyna halista, baahiyaha, iyo yoolalka, waxaan horumarinaa qorshooyin ficil ah waxaanan siino heerar daryeel aan caadi aheyn xubnaheena aadka u nugul. Tani waxay ku lug leedahay isku dubaridka adeegyo kala duwan si loo hubiyo in xubnaha la daboolay baahidooda.
Waxaan kormeer ku sameynaa habka maareynta caafimaadka iyadoo dib u eegis lagu sameynayo adeegsiga daryeelka iyo sidoo kale falanqeyn tilmaamaysa suurtogalnimada isuduwidda daryeelka, maareynta cudurrada, iyo xubnaha khatarta ugu jira isticmaalka habboon ee ilaha daryeelka. Bixiyeyaasheena waxay ku heli karaan ilaha maareynta caafimaadka bukaanka siyaabo dhowr ah, iyadoo la adeegsanayo codsi ogolaansho hore, ama gudbinta maaraynta kiisaska.
Bixiyeyaashu waxay u gudbin karaan bukaanka iyagoo isticmaalaya Foomka Gudbinta Maareynta Kiiska. Fadlan fakis ugu buuxi foomka 206-642-7073 ama iimayl ugu dir nuqul iskaan ah [emailka waa la ilaaliyay]
Barnaamijyada Adeegyada Caafimaadka
Waxaan bixinnaa barnaamijyo kala duwan oo raacaya tilmaamaha gaarka ah si loo hubiyo in adeegyadeenna daryeelka caafimaad ay yihiin kuwo waxtar leh oo wax ku ool ah. Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka waxay u adeegsadaan tilmaamaha ku saleysan bukaan eegida iyo caddeynta qalab ahaan habka maamulka caafimaadka.
Kooxda Adeegyada Caafimaadka waxay ka kooban yihiin shaqaale caafimaad iyo kuwa aan daryeel caafimaad lahayn meelaha soo socda:
Gudbinta SSI iyo SNAP
Maareynta Isticmaalka / Oggolaanshaha Hore
Barnaamijka Tababarka Caafimaadka
Barnaamijka Dib u Eegista Bukaanka iyo Isuduwaha (PRC).
Sii wadida iyo Kala Guurka Daryeelka
Waqti ka waqti, manfacyada xubinta waxaa laga wareejin karaa hal qorshe ama bixiyaha daryeelka aasaasiga ah mid kale ama wuxuu dhacayaa inta lagu guda jiro koorsada daaweynta iyada oo loo marayo joojinta heshiiska, diiwaangelinta, ama daalista faa'iidooyinka jira. Mararka qaarkood kuwan oo kale, waxaan dhiirrigelinnaa sii waditaan siman oo aan kala go 'lahayn iyo kala-guurka daryeelka caafimaad ee daruuriga ah iyo is-dhexgalka adeegyada. Qaabkan majiraan wax carqalad ah oo ku saabsan daryeelka xubinta ama daawooyinka dhakhtarku qoro iyadoo lagu dadaalayo sidii loo ilaalin lahaa xiriirka ka dhexeeya xubnaha iyo bixiyeyaasha inta hawshu socoto.
Shaqaalaha Adeegyada Caafimaadka waxay si toos ah ula shaqeyn doonaan xubnaha si loo fududeeyo dadaallada isku-duwidda ee bixiyeyaasha si ay uga caawiyaan sii wadida iyo u gudbida daryeelka kale markii loo baahdo. Waxay la xiriiri doonaan hay'adaha bulshada ama waxay u gudbin doonaan kaalmooyinka dadweynaha sida ku habboon oo xubintu u oggolaato. Waxay sidoo kale diyaar u yihiin inay ka caawiyaan bixiyeyaasha inay isku duwo adeegyada habboon iyo barnaamijyada ay heli karaan xubnaha ka socda ilaha sida:
Gaadiidka iyo Adeegyada Turjubaanka
Shabakadaha Taageerada Gobolka ee adeegyada caafimaadka maskaxda
Adeegyada Maandooriyaha Isticmaalka Maandooriyaha
Adeegyada Gabowga iyo Naafada, oo ay ku jiraan adeegyada guriga iyo bulshada ku saleysan
Xarumo xanaano oo xirfad leh iyo barnaamijyo deganaansho ku saleysan bulshada
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Maamulka Caafimaadka ee Maxalliga ah
Barnaamijka Dib u Eegista Bukaanka iyo Isuduwaha (PRC)
Barnaamijka Dib u Eegista Bukaanka iyo Isuduwaha (PRC) wuxuu ka caawiyaa xubnahu inay si badbaado leh oo habboon ugu adeegsadaan adeegyadooda caafimaad.
Xubnaha qaarkood waxay daryeel ka helaan dhowr dhakhtar oo kala duwan waxayna isticmaalaan farmashiyeyaal kala duwan. Waxaa laga yaabaa inay aad u isticmaalaan qolka gurmadka. Waxay yeelan karaan tiro aad u tiro badan oo isla dawooyin ah. Marka daryeelka aan la isku duubin, waxay noqon kartaa khatar. Mararka qaarkood waxaan u dhignaa dadkan PRC sababahan awgood. Xubnuhu waa inay buuxiyaan shuruudaha lagu aqoonsaday WAC 182-501-0135 si ay ugu qalmaan barnaamijkan.
Xubnaha loo xushay PRC waa inay doortaan hal daryeel caafimaad bixiyaha, Farmasiga, iyo isbitaal. Haddii xubintu dooran weydo bixiyeyaasha, waxaan u dooran doonnaa xubinta. Xubnaha ku jira PRC waa inay u tagaan bixiyeyaashan oo keliya. Haddii xubin ka tirsan PRC ay u tagto adeeg bixiye kale iyadoon loo gudbin, xubintu waa inay bixisaa adeegga.
Mid ka mid ah bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah ayaa hubiya in daryeelka caafimaad iyo rijeetooyinka la isku duway ee caafimaadka iyo nabadgelyada xubinta. PRC ayaa tan suurto galineysa. Xubnuhu waxay ku sii jiraan barnaamijka PRC ugu yaraan 2 sano sida lagu qeexay sharciga gobolka.
Shuruudaha Maareynta Daryeelka Caafimaadka iyo Tilmaamaha
Shuruudaha Caymiska Caafimaadka (waxaa loo go'aamiyaa baahida caafimaad)
Tilmaamaha Tababarka Caafimaadka (loo isticmaalo si loo go'aamiyo qorshaha daaweynta)
Foomka Ogaysiinta Dialysis
Waxaan raacnaa xeerarkan:
CHPW ma abaalmarinayso bixiyeyaasha ama kuwa kale diidmada caymiska ama daryeelka.
CHPW ma bixiso dhiirigelin maaliyadeed si ay ugu dhiirrigeliso kuwa go'aaminta Maareynta Ka-faa'iideysiga inay gaaraan go'aanno ka dhasha adeegsiga daryeelka ama adeegsiga.
Xubnaha shaqaalaha ayaa diyaar u ah inay ka wada hadlaan nidaamka maareynta caafimaadka, iyo dib u eegista ku faca ah ee asaaga ah (agaasimaha caafimaadka, farmashiistaha, ama agaasime caafimaad oo la shaqeeya) ayaa diyaar u ah inay ka wada hadlaan wixii ogolaansho maamul ama diidmo ah. Siyaasadaha khuseeya iyo / ama shuruudaha caafimaad ayaa la heli karaa markii la codsado.
Si aad ula xiriirto shaqaalaheena iyo dib u eegistayaasha asaaga, fadlan wac 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 711).
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Maarso 18, 2021